Home TOROHEVITRA FOTSORATRA TSY MISY MPANJAKA Mpilalao Football English Tantara momba ny fahazazan-jaza i Ashley Barnes sy Untold Biography Facts
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny sariitatry ny baolina kitra mitondra ny anarana hoe "Barney". Ny tantaranay Ashley Barnes Childhood Story Plus Untold Biography Facts dia mitondra anao ny tantara feno momba ny zava-nitranga miavaka hatramin'ny fahazazany hatramin'izao.
Ashley Barnes Tantaran'ny Ankizy - Ny famakafakana hatramin'izao. Credits mankany BBC ary DailyMail
Ny famakafakana dia ahitana ny fiainany voalohany, ny fiainam-pianakaviana, ny fiainany voalohany, ny lalana mankany amin'ny laza, mitombo ny laza laza, ny fifandraisan'ny tena, ny fiainam-piainana, ny fomba fiaina, ny fiainam-pianakaviana ary ny zavamisy tsy fantatra.
Eny, ny rehetra dia mahita an'i Barnes ho mpikatroka iray izay namorona ny laza malaza amin'ny fihanaky ny mpanohitra ary manatratra tanjona lehibe. Na izany aza, vitsivitsy ihany no mihevitra ny tantaram-pitan'i Ashley Barnes izay tena mahaliana. Izao raha tsy mila ado intsony, andao hanomboka.
Tantara momba ny fahazazan-jaza i Ashley Barnes sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography - Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Fantatry ny rehetra azy fa Ashley Barnes MANONTANY ny anarany feno dia Ashley Luke Barnes. Barnes dia teraka tamin'ny andro faha-30 tamin'ny Oktobra 1989 tao amin'ny tanànan'i Bath, United Kingdom. Teraka tamin'ny ray aman-dreny anglisy anglisy izy, ary tsy namorona fianakaviana fianakaviana anglisy. Barnes dia avy amin'ny fianakaviany avy any Aotrisy. Fantatrao ve?… Ny renibeny izay avy amin'ny razana dia avy any Klagenfurt, tanàna any Aotrisy atsimo.
Nihalehibe tao Baty i Ashley Barnes, tanàna lehibe any Angletera fantatra amin'ny fandroana vita romanina sy ny toerana arkeolojika romana mahafinaritra. Izany dia mety hohazavaina ny antony nahatonga ny raiben-drenin'i Ashley Barnes nandao ny fireneny tany Aotrisy mba hipetraka ao amin'ny tanàna anglisy.
Ashley Barnes dia avy any Bath- A City any Angletera. Ny trosa amin'ny LuxuryTraveladvisor sy ny WordAtlas
Ny tatitra momba ny fiainana tany am-piandohan'ny Ashley Barnes dia nanondro fa izy tsy nobeazina tamin'ny fianankaviana ambany antonony. Tsy liana tamin'ny fitsangantsanganana arkeolojika izy, fa baolina kitra fotsiny. Ny ray aman-drenin'i Ashley Barnes dia toy ny ankamaroan'ny fianakaviana ao amin'ny fandroana izay afaka mandany am-panangonana vaovao kilalao vaovao ho an'ny zanany lahy, ao anatin'izany ny baolina kitra.
Tantara momba ny fahazazan-jaza i Ashley Barnes sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography - Fanabeazana sy fanabeazana
Nanana ray aman-dreny tia baolina kitra, dia voajanahary ho an'i Barnes ihany no raiki-pitia amin'ny lalao mahafinaritra. Anisan'izany koa ny nanonofinofiny ho tonga mpilalao baolina matihanina.
Ashley Barnes voalohany nandray anjara tamin'ny baolina kitra dia tamin'ny fianarany voalohany. Tamin'izany, ny ray aman-dreniny dia nanoratra azy tao amin'ny Sekolin'i Writhlington izay mipetraka ao amin'ny tanànan'i Dunkerton akaikin'i Bath, England. Tany am-pianarana dia nisarika fahalianana hilalao baolina nifaninana i Ashley.
Fanabeazana sy fananganana fikarakarana any Ashley Barnes. Ny trosa amin'ny GoogleMaps
Avy any an-tsekoly, nanohy nilalao baolina kitra tamim-pahatokisana i Barnes, namorona ny fahazaran-dry zareo tsy hihoatra ny marika ary manao zavatra ivelan'ny manga miaraka amin'ny baolina kitra. Izany no nataony ho gaga ny namany sy ny fianakaviany.
Ashley Barnes dia mikendry ny ho ambony amin'ny fahazazana ary ny fahavononany ho tonga mpilalao baolina matihanina dia tsy nofinofy fotsiny. Raha vao niasa izy, dia nanapa-kevitra ny handeha hitory amin'ny Chelwood Drive izay any amin'ny distrikan'i Somerset mba hiatrika fitsapana miaraka amin'ny Bath Arsenal Juniors.
Tantara momba ny fahazazan-jaza i Ashley Barnes sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography - Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Raha mbola zaza izy dia nahita ny tenany nandalo i Barnes Fitsapana ao amin'ny akademia ao amin'ny Arsenal Arsenal Juniors ary nahomby tamin'ny fisoratana anarana. Bath Arsenal Juniors Football, na dia tsy mifandraika amin'ny Gunners aza dia klioba baolina kitra izay manana ekipa ho an'ny ankizy rehetra amin'ny taona rehetra.
Nandritra ny klioba Bath Arsenal, i Ashley Barnes dia nihaona tamin'ny mpiara-miasa aminy Scott Sinclair izay lasa matihanina ihany koa. Miaraka dia samy nanana ny fotoam-pankasitrahana izy roa nialohan'ny nandaozan'i Sinclair hiaraka amin'ny Bristol Rovers tamin'ny sivy taona.
Ashley Barnes Early Life miaraka amin'ny Bath Arsenal. Ny trosa amin'ny IG
Vao maraina, izay rehetra nirian'i Ashley dia ny hahatratra ny tampon'ny football anglisy. Amin'ny teniny:
“Isaky ny mifoha aho dia mila mamoritra ny tenako. Mahagaga ny nofinofy ho lasa pro ary manonofinofy isan'andro amin'ny mbola kely aho. ”
Tantara momba ny fahazazan-jaza i Ashley Barnes sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography - Road to Fame Story
Ashley Barnes dia nanomboka ny asany amin'ny maha-zokiolona azy amin'ny maha-mpilalao fatratra azy miaraka amin'i Paulton Rovers, klioba eo an-toerana izay misy ao amin'ny English Southern League. Young Barnes izay sary eto ambany dia tao amin'ny iray amin'ireo ligy ambany indrindra ao amin'ny rafitra English Football League.
Ashley Barnes Early Life miaraka amin'ny Football Football. Ny trosa amin'ny BBC sy i Dave Rowntree
Ashley Barnes dia nomena naoty tsara nandritra ny fahazazany. Nanomboka nahazo tolotra tena tsara avy amin'ireo klioba lehibe any amin'ny ligin'ny zokiolona anglisy izy. Ity seho ity dia nanamarika ny diany nanomboka tany amin'ny faritra atsimo ka hatrany amin'ny faratampon'ny English League System- The Premier League.
Ashley Barnes nianatra ny fomba sarotra miaraka amin'ny tsipika fampindramam-bola any Oxford United, Salisbury City, Eastbourne Borough, Torquay United ary Brighton Hove Albion. Isaky ny iray amin'ireto trosa ireto dia voamarika miaraka amina fotoana voafetra mba hampiailoana ny mpitantana azy. Fantatrao ve?… Niravoravo izy ary namakivaky ny ampahany ambany indrindra amin'ny rafitry ny ligy anglisy tamin'ny alàlan'i Loan tovolahy hatrany amin'ny faratampony rehetra amin'ny anarana hoe lasa mpitendry safidy voalohany izy.
Tantara momba ny fahazazan-jaza i Ashley Barnes sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography - Mitsangàna amin'ny tantara
Nahazo izay tadiaviny i Ashley Barnes, ilay nofinofy ho lasa mpitendry safidy voalohany ho an'ny klioba izay hanolotra azy ho fifanarahana maharitra. Ny zava-drehetra dia niseho tamin'ny vanim-potoana 2011 – 12 rehefa nanampy an'i Brighton hiverina tany amin'ny famaranana ny Tompondaka ho tompon-daka amin'ny tanjona 14 amin'ny fifaninanana rehetra.
Tao amin'ny 10 Janoary 2014, ny fampisehoan'i Barnes dia nahita azy nitazona an'i Burnley tamin'ny sarany tsy voamarina. Tao anatin'ny efa-taona monja, tamin'ny 3rd tamin'ny volana martsa 2018, dia nanoratra ny tenany ho boky momba ny tantaran'ny club izy tamin'ny fotoana naha-mpanatontosa ny klioba azy tao amin'ny EPL hatramin'ny niforonan'ny 1992. Tahaka ny tamin'ny fotoana nanoratany dia nahazo laza malaza i Barnes noho ny fanamafisana ny mpanohitra lehibe na madinika amin'ny tanjony.
Ashley Barnes mankalaza ny tanjony.Credit to PremierLeague
Na dia mety tsy ho eo amin'ny haavon'ny Sergio Aguero, fa ho an'ny mpankafy Burney, ttadidiny foana ilay nomanina 10 sarobidy. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Tantara momba ny fahazazan-jaza i Ashley Barnes sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography - Relationship Life
Ao ambadiky ny mpilalao baolina kitra anglisy nahomby dia misy sipa iray malaza be atao hoe Zan Barnes izay zara raha fantatra. Samy manambady i Barnes sy Zanà ary efa ela no niara-nivady. Miaraka dia manana zanaka lahy antsoina hoe Flynn izay teraka tao 2011 izy ireo.
Hihaona amin'i Ashley Barnes Child- Flynn Barnes
Flynn dia mety manodidina ny 2 taona tamin'ny fotoana nanaovany ity akanjo javona Brighton sy 8 ity tamin'ny fotoana nanoratana an'io lahatsoratra io.
Tantara momba ny fahazazan-jaza i Ashley Barnes sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography - Fiainana manokana
Ny hahafantaranao ny fiainam-piainan'i Ashley Barnes dia hanampy anao hahazo sary feno aminy. TheTimes nahatonga anay hahatakatra fa i Barnes dia olona ambany eto an-tany izay tsara fanahy amin'ireo mpiara-miasa aminy. Ash-Cabs, satria nomena anarana izy dia mpitatitra olona ary mpitarika mankasitraka ny fanampiana ireo mpiara-miasa aminy amin'ny fitaterana entana.
Tsy mahazatra ny sehatra Premier League ny mijery mpanao baolina kitra toa an'i Barnes manao adidy cab. Barnes anefa dia mihodina matetika ao amin'ny zaridain'ny fiara ao Burnley eo amin'ny sehatry ny fanazaran-tena amin'ny klioba miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny bus. Ity misy kaontin'ny fitantaran'ny mpankafy;
Rehefa nivezivezy ny varavaran'ny mpandeha dia nahita mpanao baolina fito nipoitra tsirairay, tsirairay. Avy eo nisokatra ny varavaran'ny mpamily ary nahazo an'i Ashley Barnes, ilay mpitarika kintany voalohany ary mpamily voatondro.
Tamin'ny voalohany dia nitondra fiara marani-tsaina i Barnes, saingy nanavao ny minibus izy taty aoriana, araka ny hita etsy ambany. Izy no nanao izany noho ireo mpiara-miasa aminy.
Ashley Barnes LifeStyle Facts. Ny trosa amin'ny AutoEvolution
Izany no antony niantsoan'ny mpitarika ara-panahy an'i Burnley FC "Ash-Cabs". Miara-mivory amin'ny lalao pickup any Cheshire ny maraina ireo mpilalao baolina kitra Burnley alohan'ny hahatongavan'ny kapiteniny sy No10 haka azy ireo.
Tantara momba ny fahazazan-jaza i Ashley Barnes sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography - Fiainana ao amin'ny fianakaviana
I Barnes dia manana fianakaviana izay monina ao Grande-Bretagne sy Aotrisy. Raha samy manantena fa ny fianakaviany akaiky dia ny mpankafy Burnley rehetra, ny mifanohitra amin'izany no mitranga. I Flynn, zanak'i Ashley Barnes dia mpankafy an'i Man City.
Ilay mpikatroka Burnley, Ashley Barnes, indray mandeha dia nanambara fa nampanantenaina fampidirana fanampiny Jurgen Klopp amin'ny alàlan'ny SMS dia isa izy amin'ny fanoherana an'i Manchester City ka manimba ny fanantenany.
Fantatrao ve?… Tsy faly i Flynn raha nahare izany. "Hoy izy tamiko: 'Dada a! Aza matotra !!.' Hoy aho taminy ... 'Miala tsiny anaka, tsy maintsy manao ny asako aho.'
Soa ihany fa tsy nanao na inona na inona i Barnes izay nifanaraka tamin'ny anaram-boninahitra voalohany tamin'ny làlana Liverpool. Raha manao izany izy dia hanana ankizilahy iray tsy sambatra izay miandry azy hiverenany nody mba hihena.
Tantara momba ny fahazazan-jaza i Ashley Barnes sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography - Lifestyle
Ho an'ny olona iray nitondra fiara Smart ho fanazaran-tena isan'andro, saingy nanavao izany ho an'ny minibus iray dia mora ny maminavina fa miaina fiainana tsotra i Barnes. In ny tontolon'ny baolina kitra maoderina amin'ny fiara sy ny fampidirana media sosialy, ny Barnes dia sahala Ngolo Kante dia anti-panahy mamelombelona.
Ashley Barnes LifeStyle Facts. Ny trosa amin'ny AutoEvolution. Ny trosa amin'ny Auto Evolution sy TheTimes
Tahaka ny tamin'ny volana martsa 2018 dia nahazo karama mitentina 2.4 Million Euro (2.0 Million Pound) isan-taona ilay mpikapoka. Manodikodina ny fidiram-bola isaky ny fotoana, dia midika izany fa ny Ashley Barnes dia mahazo £ 5,632 isan'andro ary £ 235 isan'ora, £ 3.91 isa-minitra ary £ 0.07 segondra. Na dia mahazo an'io be dia be io aza dia mpivavaka i Barnes momba ny fitantanana ny volany.
Tantara momba ny fahazazan-jaza i Ashley Barnes sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography - Untold Facts
NAMORATRA BOKY MOMBA NY FINOANA: Ity hetsika ity dia niseho tamin'ny faha-13 ny volana aprily, 2019. Andro izay no nampidirin'i Ashley Barnes tao amin'ny resahin'ny mpitia baolina kitra hoe "tena mampientanentana amin'ny toe-javatra". Jereo izay nataony etsy ambany.
Ashley Barnes Untold Facts-Ireo Famandrihana tsy mendrika. Trosa arahin'asa SportsBible. Ny trosa SportsBible
Fantatrao ve?… He novakin'ilay refee noho ny fanorohana mpiaro mpiaro antsoina hoe Joe Bennett nandritra ny lalao iray nanohitra an'i Cardiff City. Samy mpilalao nanana fiovana tamin'ny fotoana famaranana tamin'ny tapany voalohany izay saika nahatonga ny ady. Raha tokony nanakatra ny lohany mankany Bennett i Barnes dia nanapa-kevitra ny haneho ny fitiavany tamin'ny fanorohana azy.
TIPPING A REFEREE: Tamin'ny 9 martsa 2013, Barnes dia nahazo karatra mena tamin'ny fotoana fijanonana nanohitra an'i Bolton izay voalaza fa toy ny endrika hafahafa be ihany koa. Nahomby ny fikasana tratrany tamin'ny mpitsara.
Ashley Barnes dia namandrika boky hisintona mpitsara. Credit any DailyMail
Io dia noheverina ho fandisoana lehibe nataon'ny FA anglisy izay nanome azy fandrarana lalao fito. Faly ny mpankafy azy, niverina avy tamin'ny fandraràna ny 20 aprily ny tanjona roa tamin'ny fandresena 6 – 1 tamin'ny Blackpool i Barnes. Nomena anarana tao amin'ny lalao izy.
NY MPAMORA FAMPISORIANA TOKOA INDRINDRA INDRINDRA: Tsy olon-kafa afa-tsy izy Virgil van Dijk, ny Tokana ny mpiaro iray izay nambarany fa mbola tsy mankato ny zava-bitany rehetra.
Ashley Barnes dia mahita an'i Virgil van Dijk ho mpiaro faran'izay henjana indrindra hatrehiny. Ny trosa amin'ny BurnleyExpress
Hoy ny teniny: “Virgil van Dijk no tena mafy tamiko izay novolavolaina tamin'ny asako. Izy irery no hany tsy azoko hatrizay. Lehilahy matanjaka sy mahery izy. Virgil dia milina, ”Hoy i Barnes.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra noho ny namakiana ny tantaran'ny Ashley Barnes Childhood sy ny Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.